Cayaartooy tahriibeyaal lagu khalday oo la tarxiilay - BBC News Somali
Cayaartooy tahriibeyaal lagu khalday oo la tarxiilay
Waa la cusbooneysiiyay 27 Abriil 2020
Xigashada Sawirka, Nigerians in Diaspora Commission
Uchenna Abia iyo Kenneth Eboh ayaa BBC da u sheegay in ay ku faraxsanayeen dib usoo noqoshadooda. Bishii la soo dhaafay ayaa waxay u u socdaaleen dalkaasi Croatia laakiin booliiska ayaa ku khasbay in la geeyo Bosnia halkaas oo lagu hayey xiro qaxooti ah.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Croatia ayaa sheegtay in aysan ka war heynin sida ay ku danbeeysay xaaladooda halkaa.
Mr Abia iyo Mr Eboh ayaa si sharci ah ku galay Croatia bishii lasoo dhaafay iyagoo doonayey in ay ka qayb galaan tartanka teyniska-ka oo ka dhacayay magaalada Pula.
Waxaay sheegeen in ay dhex lugeeynayeen gudaha caasimadda Zagreb iyagoo markaasi u diyaar garoobay iney dib ugu laabtan dalkooda Nigeria, markii ay sarakiisha booliis Croatia ay qabanayeen oo ay si khasab ah u geeynayeen xaduudda Bosnia aadan.
"Waxay nagu Khasbeen inaan galno Bosnia. Ma aanaan lahayn kala doorasho sababtoo ah waxay isku dayeen in ay na tooktaan", Mr Eboh ayaa sidaasi u sheegay BBC -da.
"Waxay nagu yirahdeen waxaad ka timaadden Bosnia, waana inaad aadaan Bosnia'", intaa ayuu ku daray hadalkiisa.
Ardayda ayaa sheegay inay isku dayeen in ay u sharxaan saraakiisha in dalku gal saxan ay haystaan balse way iska dhaga tireen.
"Ma garan karno sababta ay inoogu soo direen dal kale habeen saq dhaxe.... waxay nagu Khasbeen inaan saq dhaxe duurka ka gudubno," Sidaana waxaa yiri Mr Eboh.
Kadibna waxaa lagu hayay kaam ku yaala magaalo u dhow xaduuda oo la yiraahdo Velika Kladsa, halkaas oo ay sheegeen in taleefoonadooda looga qaatay.
Nin dadka tahriibiya oo 'xuduud been-abuur ah ka sameystay gudaha Ruushka'
Bosnia waxa ay wado weyn u tahay muhaajiriinta doonaya in ay u gudbaan Yurub, waxaana soo gaaray dalkaasi muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso 45,000 tan iyo bilowgii sanadkii 2018kii. Hay'adaha gargaarka ayaa ka digay in xaalado bini'aadanimo ay halkaasi ku wajahaan dadka aan heysan guryaha marka la gaaro xiliyada qaboobaha.
Mr Abia ayaa dadka reer Bosnia ku tilmaamay in ay yihiin dad wanaagsan, isagoo sheegay inay ku faraxsanyihiin dadka reer bosnia ee soo booqda kaamka islamarkaana siiya cunada.
Kadib markii ay Nigeria dib ugu soo noqdeen ayaa Mr Abia sheegay in haatan uu dareemayo xurnimo iyo badqab.
Balse dowladda Croatia ayaa beenisay eedeymaasi, iyagoo sheegay in ardayda laga waayey hotelkooda markii laga eegay.
7 Disembar 2019
Muuqaal, 'Beaten and robbed': How Croatia is policing its borders